Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: August 2017
BITIIF GURGURII LAGACHUUN HUMNA DIINA CABSUU NU DANDEESSISA
(Barruu duula lagannaa bitiif gurgurii irratti qophaa’e)
Dhimmi bitiif gurgurii lagachuu kun sadarkaafi dhawaataa danuu qaba. Tooftaan lagannaa bitiif gurgurii adeemsifamu bifa saayinsaawaan lagannaa sadarkaa duraafi lameessoo (primary & secondary boycott) jedhamuun bakka lamatti qoodama. Kan amma irraa dubbannu kun lagannaa bitiif gurgurii oomishtootaa fi daldaltoota sadarkaa jalqabaa (primary Boycott) irratti xiyyeeffata. Kan sadarkaa lammeessoo bulfannee arraaf lagannaa gabaa sadarkaa jalqabaa gaggeessuun kun faaydaa argamsiisuu danda’u keessaa muraasni:-
1) Siyaas-diinagdee wayyaanee laamsheesa:
Sababni guddaan oromoon oomishuu malee irraa gammaddee hin beekneef tarsiimoo misoomaaf mootummaan wayyaanee baase kanaatu akka oromoon barayyu diinagdeen gad caphuu malee taakkuu takka ol hin siqnetti wixineeffamee jira. Wayyaaneen yaad rimee dinagidee "zero sum game economic theory" karoorse waggoota 25 keessatti dhawaatan hojiirra olaa dhufee waytii amma humna dinagidee saba Tigree cimisee jira.
Yaadni kun oromoo, sabaafi ummataa biraa dhaawaatan hiyyoomsee sanyii Tigree duroomisuuf kan kaayyeefate tahuu isaa fakkeenyi ijoon, warshaalee gurguddoon Tigraay keessatti hundeefamanii jiraachuu dha. Daandiin baaburaa Maqalee - Kombolchaan naanna'ee gara Jibuutiitti fullaa'uus kanaaf ragaadha.
Oromoon lafasaarra ari'amee hiyyummaa hamaa keessa seenee waardiyaa ta'ee biyya abbaa isaa keessatti akka saree mooraa alagaa eegaa jira. Yeroo ammaa ilmaan Oromoo mirga isaa gaafannaan, amma booda lafa tiyya irraa hin buqqa’u jedhee dinnaan wayyaaneen qawwee diinagdee keenyaan horattetti fayyadamuun yakka duguuggaa sanyii nurratti raawwachaa jirti. Kanaaf duula lagannaa bitiif gurgurii guutuu Oromiyaa keessatti torbaan tokkoof walitti aansinee gabaa lagachuun diinagdee wayyaaneen murruq nuun godhaa jirtuufi humna ittiin ummata cunqursu kana laamshessuun ol’aantummaa diinagdee ummanni Tigree nurratti qabaachuuf wixifatan kana hidha kutuuf nu fayyada. Kun faaydaa guddaafi ijoodha.
2) Qabeenya Keenya Irratti nu Abboomsa:
Mootummaan wayyaanee tooftaa addaa baafatee Oromoo malaan quncisaa jiru keessaa beekkamaan maqaa diinagdee gabaa bilisaa ijaaruu jedhu qabatee “Eenyulleen Oomisha isaa bakka barbaaddetti, gatii barbaadeen gurgurachuu mirga qaba” jedhee kijiba. Hanga arraa garuu wanti qabatamaan arginu faallaa dha. Qotee bulaan Oromoo oomishuma humna isaatiin bututee lafa isaarraa oomishatu magaalaa isatti aantu geessee gurgurachuu hin danda’u. Sababniis, ashuuraaf qaraxa humna isaaniin wal hin gitne dirqamaan kafalchiisuun akka inni gabatti waa gurgurachuu jibbu godhee, akka isaan hin kaanetti gombisaa jira. Oromoon dur irraa hanga arraa oomishuu malee irraa fayyadamee hin beeku. Oromoon harree damma itti fe’an tahee yeroo mara hiyyummaa keessatti maraammartoo akka dhawatu kan godhe tooftaa wayyaanee daran nutiis tarkaanfii barbaachisu fudhachuu dhabuu keenya. Gatii gurgurtaa oomisha biyya keenya keessatti kan gurguratu osoo hin tahin warra bitu qofaatu murteessuuf aangoo qaba. Silaa gurguratuutu gatii oomisha isaa murteeffachuu qaba malee warri bitu akkuma barbaadutti murteessuu hin qaban ture.
Fakkeenyaaf; Oomisha kuduraaf muduraa, jimaafi kkf biyyoota ollaa akka soomaaliyaafi Jibuutiif kan dhiheessu adda durummaan qotee bulaa Harargeeti. Soomaaleen magaalaa Awwadaay, Kombolchaa, Haroomaayaafi Dirre Dhawaa keessa dhuftee jimaa, kuduraafi muduraa qotee bulaa keenya irraa bitu daldaltoota keenya muraasa waliiniis wal tahuun gatii oomisha isaanii gad cabsee akka fedhetti irraa bita. Kana akka hin murteeffanne wanti nu godhe immoo nuti qabeenya keenya irratti abboomuu dadhabuu keenya. Qotee bulaan Oromoo gatii oomisha isaa hanga barbaadetti akka shalagatee gurguratuuf carraa bal’aa uumaaf, oomisha keenya irratti abbaa aangoo tahuun murteessummaa nama tokkootiin alatti ofiif taligachuu kan dandeesisu, humnaafi dandeetti murree murteeffachuu akka horannuufi barannuuf kan nu tinnisu oomisha keenya guyyoota muraasaaf gurguruu diduudha. Uggurri bitiif gurgurii kun qabeenya keenya irratti tooftaa salphaan akka abbaa taanu karaa nuuf banuufi qotee bulaan keenyaas oomishaisaa itti laffa’ee, itti luqqa’ee oomishu gatii barbaadetti gurgurachuu akka danda’u taasisa.
3) Gatii oomishoota madaalawaan akka jiraatu taasisa:
Akkuma agarruufi dhageenyu ummanni biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessa jiraatu harki caalaan duugda Oromiyaa irratti harka Oromootiin jiraata. Tahuus garuu Oromoon oomishee gatii salphaafi baayyee xiqqaa taheen callaa isaa gurgurachuuf dirqamaa ture. Sangaa gabbisuu malee takkaa irraa gammadeefi irraa gabbatee hin beeku Oromoon. Osoo bifa ogummaawaan shalagamee qotiyyoo tokko gabbisuuf baasiin itti baafamuufi gatiin inni itti gurguramu wal hin caalu. Yeroo ammaa Oromiyaa keessatti qotee bulaa bututee oomishatu irra warra dallaala tahee baasiifi darara tokko malee oomisha qonnaan bulaa kana gurguruutu arra dachaa meeqaan duroomaa jira. Warri kana godhan immoo warra Oromiyaa alaa dhufan kan lafa hin qabneedha. Dallaalli tokko qabeenya oomishataa tokko warra bitu waliin wal dubbatee yoo gurguru waan herreegatu qaba. Hojii bittuufi gurgurtuu wal qunnamsiisuu qofaan yeroo gabaabaa booda qabeenya horatee lafuma qotee bulaa keenya irraa bituun ykn kireessuun akka inni lafuma isaa irratti hojii humnaa (kuulii) hojjatee, waardiyaa tahee jiraataniif dirqisiisaa jira.
Gama tokkoon qotee bulaan sangaa tokko waggaa guutuu gabbisee gabaa baasee yoo gurgure daara ijoollee lamaatti guyyuma san magaalatti fixee gala. Sababniis oomishni warshaa irraa bahuufi kan qotee bulaan keenya oomishatu gatiin isaa dachiif samiidha. Kun tahuun wanti lafaa bahuufi warshaa irraa bahu gatiin isaa wal qixaataa tahuu qaba jechuu osoo hin taane gatii walitti siqaa tahuutu irra jira jechuu kooti. Walitti maluu dhabuu gatiilee Oomishaa kanaatu osoo abbaan lafaa mana citaa hin jijjiirranne kan midhaan daldalu gamoo wal irratti ijaaruu jalqaba. Osoo abbaan itti luqqa’ee sangaa gabbise gurguru kophee hin bitanne warri gogaa daldaluufi qotiyyoo isaa bitee qalee foon gurguru konkolaataa akka hoolaatti tarree galchee mooraa keessa dhaaba. Sirna dhabiinsaafi wal madaaluu dhabuu gatii oomishootaa irraa kan uumee dha. Kanaaf ummanni keenya guyyoota jedhame kana waan tokko gabaa baasuu dhiisuun san booda gatii barbaadetti murteeffatee oomisha isaa gurgurachuu isa dandeessisa.
4) Gateetiin Diinagdee biyyattii baadhatee jiru Oromiyaa ta’uu mirkaneessa.
Oromoon seenaa biyyattii keessatti abbaa dachii badhaatuufi bal’oo tahee osoo jiruu bara baraan, sirna dhufaa dabraa keessatti guyyaa tokko qabeenyaafi oomishaa isaa irraa gammadee hin beeku. Eega gaafa Minilik afaan qawweetiin gabroome sabni Oromoo qotee oomishuun alagaa sooraa,, loon gabbisu ambaatu qalata, waan qabu biraa hoonga’ee, beela’ee kabajaas dhabee jiraachaa jira. Namni qabeenya isaa irratti muree murteeffachuu hin dandeenye hiyyeessa, hiyyeessi immoo hin kabajamu. Yeroo mara wanti harmeen teenya haadha qoraanii, abbaan keenya abbaa re’ee, abbaa hoolaa jedhamee yaamamuuf, osoo nama ta’ee jiruu wanti namummaa dhabee jiraatuuf waan qabeenya isaa kan bututee oomishatu irraa milkaa’uu dadhabeefi. Oromiyaan gateetii diinagdee Itoophiyaa taatee osoo jirtuu Oromoon immoo gad aantummaafi gadadoon biyya isaa keessa jiraataa jira. Kuniis haala lamaan mirkaneessuu dandeenya. Tokko oomisha ofiif oomishatu irraa mlkaa’uu dadhabuu isaa yoo kaan immoo galiin mootummaa harki caalu Oromiyaa tahee osoo jiruu baajanni mootummaan Oromiyaaf ramadu immoo kan naannoolee biraa waliin reeshiyoon yoo laalamu gar malee xiqqaadha, kan nama qaanfachiisu. Diinagdee biyyattii baadhatee kan deemu Oromiyaa tahee osoo jiruu kabaaf kabajaa dhabuun nu fixaa jiraachuun wayyaanee kun nuuf mirkaneessa. Kanaaf, Oromoon yoo guyyuma tokko oomisha isaa gabaa baasu kana waliif galee kan lagatu tahee gateetiin diinagdee biyyattii Oromoo tahuun hubatamee kabajaan isaan malu laatamaaf. Oromoon dafqa xuruurfatee beela’aa oomishee akka ummanni biyyattii quufanii bulu taasisaa jiraachuu mirkaneessuun kabajaafi ulfina isaan maluus argata.
5) Adeemsa daldala Tigree gufachiisa.
Sadarkaa biyyaatti keessatti daldaltoonni jiran kan saba biraati. Ilmaan Oromoo immoo daldala yaraafi sadarkaa gadii qofarratti malee daldala ol’aanaa irratti hirmaachaa hin jiran. Dhuguma dubbachuuf oromoon ammallee karameellaa ijoollee qofa gurguraa jira. Kolkolee gati dhabeessa magaalaa xixiqqoo qofa keessatti hirmaachaa jira. Magaalaa gurguddoo keessatti daldala gurguddaafi murteessaa irratti hirmaachuuf Oromoon hayyaama hin argatu. Kanaaf ragaan guddaan abboottii qabeenyaa Finfinnee keessa jiraniifi warri oomisha biyya keessaa alatti erguufi biyya gamaatii fichisiisuu (inporter and exporter) keessa meeqa Oromoo akka tahan eenyulleen tilmaamuu danda’a. Irra baayyeen saba biraa tahanillee immoo hangafoonni saba Tigreeti. Saniifuu immoo aanga’ootaafi qabsaa’oota warra Tigraay akka tahe beekkamaadha. Oomisha biyya keessaa albuda irraa hanga barbareefi biddeenaatti, kan biyya gamaati seensisan immoo motoora gurguddaa irraa lilmeetti kan galchu isaani.
Gama biraatiin abboottiin qabeenyaa saba biraa tahan oomishoota biyya alaatii seera qabeessaan gara biyya keessaa galchan akka hin milkooyneef ilmaan Tigree guutuun daldala ‘kotorobaandii’ irratti hirmaatanii hojjachaa jiran. Ilmaan Oromoo daldala kotorobaandii hojjatan immoo qabeenya saamamanii harka duwwaa galu. Saba biraa kan tahan kanneen gama seera qabeessaan meeshaa alaa fidu irra baayyeen kasaaree harka dhadhawatee hojii daldalaa keessaa baafamanii jiran. Gama kaaniin immoo oomisha qonnaan bulaa irraa gatii salphaan argachuuf daldaltoota xixiqqaa maqaa maammilummaatiin hanga baadiyyaatti caaseeffamaan diriirfatanii oomisha qonnaan bulaa keenyaa saamsisuun gara alaatti warri ergu Tigreedha. Warri ummata keenya cunqursee gatii xiqqaan oomisha qonnaan bulaa irraa bitu immoo namuma keenya kan osoo dilas hin fayyadamne ummataaf aantummaa hin qabnee dha. Kanaaf daldaltoota faaydaa Tigreef ummata keenya sancaraa jiru addaan baafachuuf, warra dantaa garaatiif sabaaf dantaa hin qabneefi aantummaa dhugaa ummataaf qaban tooftaa gabaa lagachuu kanaan addaa calalachuufi gulaaluun ni danda’ama. San booda warra diina cinaa dhaabbatan irratti tarkaanfii fudhachuuf nu fayyada.
6) Shalaggii Kafaltii Humnaa Olii Sirreessa.
Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa shalaggii adda addaa kan akka gibiraa, kiraa lafa baadiyyaa, qaraxa, ashuura, gatii calla guddiftuu kkf humnaa ol qotee bulaafi daldalaa keenyarratti fe’ee humna ummataa butuchaa jira. Qotee bulaan lafa muraasa qabu xaa’oo birrii 2000 oliin, sanyii filatamtuu birri 1500’n bitee, lafa hektaara 1 hin geenye irra gibira birrii 500-1000tti, kafaltii biroo tan maqaan isii hin beekkamne danuu dirqisiisee kafalchiisaa jira. Gama biraatiin daldaltoota shaqaxa meeshaan firiin lama keessaa mul’attu gibira guddaa humnaa olii irratti shalagee funyaan qabee irraa funaanaa jira. Uggurri bitiif gurgurii kun immoo wayyaaneen tolaan osoo hin tahin dirqiin shalaggii fi gatiilee wantoota inni daldaluu akka xiqqeessu godha.
7) Qabsoof Humna dabalataa tahuufi faaydaalee biroo.
Qabsoon warraaqsa ummata bal’aan gaggeeffamtu adeemsaafi akkaataa mataa isii danda’e qabdi. Injifannoo barbaachisu galmeessuuf tooftaa qabsoo jijjiiraa deemuun dirqama taha. Kanaaf oomishoota keenya kan humna teenyaan oomishnu gabaa baasuu dhiisuu dabalatee wantoota biroos gabaa irraa bituu dhabuu akkasumaas tajaajiloota biyyatti kan galiin isaa kallattiin mootummaa wayyaaneef galu kan akka lootarii biyyooleessaa, teelee Itoophiyaa, Baankii Daldala Itoophiyaa kkf irraa lagachuun humna wayyaanee dha’uuf nu gargaara.
Qabsoon duula gabaa lagachuu kun miidhaa kallattii mootummaan nurra gahu kan akka ajjeechaaf madeessuu baayyee gad xiqqeessuun bu’aa keenya immoo dachaan dabala. Namuu mana isaatti oomisha isaa waliin hafee magaaleeffachuu dhiisuu waan taheef walitti bu’iinsa hin qabu. Waan ofii hin gurguradhu jechuuf namni namatti dubbatu immoo yoo jiraate san maraataa callaadha.
Gama biraatiin gamtummaa, wal jala deemsaafi humna Oromoon qabdu mul’isuuf tooftaa salphaadha. Oromoon keessattuu wayta ammaa kana aariifi xiiqiin bokokee waan jiruuf waan jedhe irraa hanga galmaan gahuu akka hin deebine hojiin itti mul’isuu dandeenya. Oromoon yoo wal ta’eefi waliif gale waan mara akka godhuun isaaf salphaa ta’e alagaan dhugoomfachuu akka danda’utti mirkaneessaaf. Kana malees faaydaan biraa kan akka hawaas-diinagdee biyyatti micciiruun ummanni biraa akka mootummaa gaafiin sardu godhuun tumsa qabsoo teenyaaf dabala. Kanaafi tartiibbawwan armaan olitti tarreeffaman dabalatee faaydaalee biraa danuus ni qaba. Kanaaf gabaa lagachuun, bitiif gurgurii qabeenya keenyaa diduun duula rasaasa malee walakkaa injifannoo tahe kana irratti Oromiyaa guutuun duuluu qabna.
“Oromoon waan isaa gurgurachuu dhabu mirga qaba. Bara baraan ofiif luqqa’ee diina hin gabbaru!”
Saphaloo Kadiir / Abdulbasit
Posted by Hasan Ismail at 7:10 AM No comments:
OPEN LETTER: (By Jawar Mohammed)
- Global Fund’s Office of the Inspector General
The country has received over $2 billion from 2002 to 2016, as per the report of the Global Fund itself. But the regime in power misused and misappropriated much of this money by manipulating and taking advantage of Global Fund’s good-intentioned principle called ‘Country ownership’ -- at the heart of which is the golden idea that people determine their own solutions in fighting the diseases affecting their health, and take full responsibility for them.
Posted by Hasan Ismail at 11:44 AM No comments:
Dr. Awol Kasim Aloofi Jawar Mohammed Garaagarummaan Isaanii Maali?
(Hawi - Anole irraa)
Waan hunda dura garaagarummaan jiraachun, hayyoonni yaadota irratti waldhabuun waanuma siyaasa keessa jiru ta’uu isaa hubachuun baay’ee nu barbaachisa. Dhimmi Uummataa dhoksaa hin qabu. Ajandaa sabaa irrattis waldhibdeen guddaan akkamiin kaayyof galmi sabaa dhugooma isa jedhu malee dhimma dhuunfaatii miti. Adeemsafi kallattii qabsoo akkasumas tarsiimoo irratti garaagarummaan ni jiraata. Kuni waan seenaa qabsoo biyyoota hundaa irratti argine, kan borus iftaanis uumamuudha. Kanaafuu, waldhibdeen akkanaa hayyoota Oromoo jidduutti yoo uumame akka waan badiin guddaan dhalatee tokkootti ilaalamuu hin qabu yaada jedhun qaba.
Barreeffamoota isaa kana duraas dabalatee kan dhiheenya kanaa dubbisee, bifa naa mijateen erga dhimmicha qulqulleefafchuuf yaaleen booda garaagarummaan uumame maal akka ta’e hubachuuf yaaleera. Akka Ilaalcha kootiitti qabxiilen garaagarummaa kanneen armaan gadi kana jedheen amana.
1. Kallattii Qabsoo Oromoo - Akka Ilaalcha Awwalitti kallattiin qabsoo Oromoo ammas taanan sirriitti adda bayee lafa hin teenye. Akka amantaa isaatti akkaataan amma ittii adeemaa jirru garam akka deemnufii maalif akka adeemaa jirru sirriiti hin agarsiisu. Kanaafuu mariin hunda qabeessa ta’e gaggeeffamee waliigaltee irra gahamuu qaba yaada jedhu qaba. Jawaarin dabalatee warreen qabsoo adda durummaadhaan gaggeessaa jiran immoo qabsoon keenya akka duraanii sana haala gubbaa gadiitiin ( top down approach) hin gaggeeffamtu jedhu. Inni gubbaadhaa gadi gaggeessan suni milkii fiduu hin dandeenye jedhaniit amanu. Kallatti kanaan immoo bu’aan qabatamaan dhufee jira jedhaniitis ni amanu.
2. Qabsoon Oromoo Nama Tokko Irratti Irkachuu - Qabsoon Oromoo nama tokko qofa irratti irkachuu hin qabdu jechuudhaan yeroo ammaa kanatti wanti hundi ‘ Abbaa Irrummaa’ nama tokkootiin masakamaa jirti yaada jedhu qaba Awwal. Kunimmoo galmaan nu ga’uu hin danda’u jedhees ni amana. Jawaar gama isaatiin Uummaticha bifa mul’ataa jiru kanaan sochoosaa akka jiru, qabsoon qabsoo dhuunfaa isaa osoo hin ta’in qabsoo uummatichaa, kan uummataan hogganamu akka ta’e irra deddeebi’ee dubbata. Duulli Abbaa Irrummaa kan irra deddeebi’amee kan ka’u ta’us namoota heddu biratti kan faarfamaafi xiyyeffannaan guddaan itti kenname bu’aa qabatamaa Jawaar qabsoo Oromoo eddoo itti riphxe irraa kaasee bifa namni hundi arguun sochoosee diina gatantarsuu isaati.
3. Bilisummaa Yaadaa - Awwal irra deddeebi’ee wanta aaridhaan dubbatu keessaa inni guddaan bilisummaan yaadaafi ilaalchaa qabsoo keenya keessatti gufateera ilaalcha jedhu qaba. Akka komii isaatti namni yaada ijaarsaas ta’ee qeeqaa dhiyeesse tokko battalumatti akka waan namoota dhuunfaa qeeqeetitti ilaalama, kunimmoo sirrii miti yaada jedhu qaba. Kanaaf immoo hordoftoota Jawaar qeeqa, namoota arrabaan yaada namaa danqan akka waan Jawaar bobbaaseetittis ni ilaala. Ibsa kanaan dura Jawaar namoota isa qeeqanis ta’ee isa abaaraniif baase irratti inni nama abalu naa dubbadhu, narraa falmi jedhee ajajate/ ramadate tokkoyyuu akka hin qabne dubbata. Waan isarratti dhiyaatu kamiyyuu ofirraa deebisuuf deeggarsa akka isa hin barbaachisne dubbata.
4. Sabboonummaa Oromummaa - Jawaar sabboonummaan Oromoo sirriitti lafa qabachuu qaba, sabni keenya sirriitti jabaateefi cimee of danda’aa ta’ee miila lamaan dhaabbachuu qaba yaada jedhu qaba. Awwal gama isaatiin sabboonummaan garmalee jabaate saba keenya ni miidha yaada jedhu qaba. Qabsoon keenyaafi adeemsi keenyas sabaaf sablammoota biroo xiyyeeffannaa keessa galchuu qaba yaada jedhus ni dhiyeessa. Kanaaf immoo qabsoon hunda hammataa ta’e gaggeeffamuu qaba jedhee dubbata. Namoonni hedduun yaada isaa kana akka habashumaa leellisuutti fudhatuudhaan qeeqa guddaa irraan ga’u. Habashaa waliin hojjachuus ta’ee Itiyoophiyummaa xiyyeffannaa keessa galchaa adeemun qabsoo Oromoo laamshessuu malee faaydaan inni nuuf fide tokkos hin jiru kanneen jedhanis laayyoo miti.
5. Waliin Hojjachuufi Wal tumsuu - Akkuma irra deddeebidhaan argine Awwal dhimmoota garagaraa irratti Jawaarif dhaamsa dabarsus ( gama iimeeliis ta’ee gama birootiin) deebiin Jawaar kennu Awwaliin akka gaddisiisetti dubbata. Namni Miidiyaa Sabaa hogganuufi qabsoo sabaa gaggeessu deebii sirrii kennuu qaba yaada jedhu dhiyeessa. Jawaar gama isaatiin Awwalis dabalatee qaamota biroo irraa waan abdii mure fakkaata. Akka fakkeenyaatti yoo kaasne yeroo OLC ( Konveenshinii Hoggansa Oromoo) Atlaantaa irratti qophaa’u Jawaar dhaamsa nama hunda ilaallatu, eenyuyyuu hirmaannaa akka godhu ifatti labsee ture. Yeroo sana Awwaliifi namoonni isa waliin turan waamicha saniif deebii kennuu irra haala addaatiin nuti affeeramuu qabna ilaalcha jedhu ( may be) qabaachuu irraan kan ka’e erga gumiin gaggeeffamuuf bultiin xinnoon hafe qeeqa bal’aa miidiyaa hawaasaa kana booresse dhiyeessanii turan. Wanti suni Uummata keenya qofas osoo hin ta’in qaamota biroo kan Aktiivistoota keenya akka fakkeenyummaatti fudhachaa turan hunda ajaa’ibsiise. Deebin yeroo sana Jawaar deebises gabaabduudhuma ture - Isin darbadhaa, nuti walitti qabneet ittii ijaarra jedhe. Sana jechuun isaas Awwaliifi garee isaa hedduu gaddisiise.
6. Marii Dhiheenya Kana Qindeessummaa Awwaliin gaggeeffame - Walgahii Waldaa Qorannaa Oromoo ( OSA) irratti qorannaa Dr. Muhaammadifi Dr. Asfaawin OMN irratti dhiyaate ilaalchisee Uummanni komee dhiyeessun isaa ni yaadatama. Komii kanarraan kan ka’e namni hedduun OSA abaaruu eegalan, akka dhaabbata kufeetitti qeeqan. Yeroo kana Awwal OSA cinaa dhaabbatuun waldaan kuni qabeenya Oromooti, yaada uummataa waan hin calaqqisiisnef qofa abaaramuu hin qabu jechuudhaan dubbate. Guyyoota muraasa boodas namoota OSA irratti OMN ilaalchisee haasaa taasisan affeerudhaan sagantaa marii qopheesse. Marii kanarratti Jawaaris affeeree akka ture, Jawaar immoo affeerraa sana akka fudhachuu dide dubbate. Kanaan walqabatees Awwal aarii qabuufi qeeqa Jawaar irratti qabu dhiyeesse, kuni daran dubbii oo’ise. Akka yaada namoota hedduutitti Awwal mataansaa kanaan dura Jawaarin qeeqaa waan tureef nama walabummaadhaan namoota kana affeeree mariisisu hin danda’u kanaaf Jawaar affeerraa isaa fudhachuu dhabuun sirriidha yaada jedhu qabu.
7. Obsa Qabeessummaafi Miira Ofii Too’achuu - Akka kanaan dura irra deddeebidhaan arginetti Awwal miira ofii too’achuu irra morkaafi aariitu dubbii isaa irraa calaqqisa. Inumayyuu al tokko tokko namoota gadi qabanii sia qeeqan hamma arrabsuuttis ni ga’a. Jawaar gama isaatiin qeeqni hedduun, qaamota hedduun irratti ka’us akka laayyotti miiraan butamee deebii hin kennu. Deebiin inni hawaasa duratti kennus bifa miira uummataatifi qabsoo Oromoo hin miinen kan barraawudha. Tarii haasaa dhuunfaadhaan taasisan keessatti jechoota hamaadhaan walitti deddeebisuun ni mala ta’a. Wanti Hawaasa bal’aa fuunduratti arginu garuu Awwal caala Jawaar obsa akka qabu namootni hedduun ni dubbatu.
Walumaagalatti, Awwalis ta’ee Jawaar Qabsoon Uummata Oromoo eddoo barbaadame akka geettuf waan danda’an godhaa jiru. Lameenuu hamma danda’aniin Uummata isaanii waan amansiisu hojjachuuf oliif gadi jechaati jiru. Isa kamtu lameen keessaa dhimma Uummata keenyaa irratti dhimmamee, yeroo isaa, dandeettii isaafi jireenya isaa aarsaa godhee akka daran hojjachaa jiru waan uummanni ilaalee itti murteessudha. Kanarraan kan hafe, qaamni kun guutumaan guututti sirriidha, inni kuni dogongora jechuun waan danda’amu natti hin fakkaatu. Hammuma fedhe garaagarummaa haa qabaatan malee boru walitti deebi’anii Uummatni keenya akkaataa bilisummaa ofi itti argatu irratti akka waliin hojjatan abdii guddaan qaba. Hammasitti hundi keenyayyuu eenyumtuu waan itti amane, bifa hamileefi miira hawaasa keenya hin miinen, mariifi falmii fayya qabeessa ta’e gaggeessuu aadaa godhachuun faaydaa guddaa akka nuuf qabu hubachuu qabna jedheetin amana. Wal abaarun, wal arrabsuuniifi garmalee waldhiibun hunda keenyayyuu eessanuu ni hin ga’u. Hamma danda’ameen hayyoonni keenya qaawwa isaan jidduu jiru daran bal’isuufii, ol fuudhanii xiqqaaf guddaas hawaasa biraan gahuun dura obsaan irratti hojjachuun gaarii natti fakkaata. Yeroon kana jedhu immoo wantin ani dubbadhe hundi sirriidha jechuu akka hin taane naa hubachuu qabdu. Tarii wantin ani dogongore, looge yookin bifa dogongoraatin hubadhe yoo jiraate yoomiyyuu of sirreessudhaaf qophii ta'uukoo isiniif ibsuun barbaada!
Posted by Hasan Ismail at 1:47 PM 2 comments:
BITIIF GURGURII LAGACHUUN HUMNA DIINA CABSUU NU DA...
Dr. Awol Kasim Aloofi Jawar Mohammed Garaagarummaa...